प्रेमीका कारण अंकिताले आफु भन्दा २६ वर्ष जेठा मिलिन्दसंग विवाह गर्न राजि भइन्, के थियो त्यो कारण ? – Classic Khabar
प्रेमीका कारण अंकिताले आफु भन्दा २६ वर्ष जेठा मिलिन्दसंग विवाह गर्न राजि भइन्, के थियो त्यो कारण ?
अंकिता कोंवर भर्खर ३० वर्षकी भइन् । उनले प्रसिद्ध अभिनेता तथा मोडल मिलिन्द सोमनसंग विवाह गरेको ३ वर्ष भयो । यद्धपी उनीहरुको प्रेम ७ वर्ष चलेको थियो । अंकिता भन्दा मिलिन्द २६ वर्ष जेठा छन् । उमेरको निकै फरक भएपनि दुबै प्राय एक अर्काको बारेमा रोमान्टिक पोस्ट साझा गर्न भने विर्सदैनन् । यो जोडी उमेर को अन्तर को कारण ट्रोल भने बनिरहेका हुन्छन् । यद्धपी दुईको बीच प्रेम र फिटनेस को क्रेजलाई भने सबैले प्रशंसा गर्छन ।
मिलिन्दसँग अंकिताको पहिलो भेट एउटा होटलमा भएको थियो। जब अंकिताले मिलिन्दलाई होटल लबीमा देखिन् उनी आफैंलाई रोक्न सकिनन् र उनीसँग भेट्न गइन् । यो बैठक छोटो थियो। यस पछि, दुबै को अर्को बैठक एक नाइट क्लब मा भयो। दुबैका आँखाहरु एक अर्का बाट टाढा हुन सकेनन्। अंकिताले साहस जुटाएर मिलिन्दलाई नाच्न आग्रह गरीन् र मिलिन्दले पनि हुन्छ भने। यस पछि दुबै एक अर्का संग लामो समय सम्म नाचिरहे।
रिपोर्टका अनुसार मिलिन्दले अंकितालाई धेरै मन पराए र अंकितासंग उनको फोन नम्बर मागे। तर अंकिताको फोन थिएन र नम्बर याद थिएन। यस पछि अंकिताको साथीले मिलिन्दको नम्बर आफ्नो फोनमा सुरक्षित गरीन्। त्यसपछि के थियो, अंकिता र मिलिन्द को बीच कुराकानी को श्रृंखला शुरू भयो।
ती दिनहरु जब अंकिता र मिलिन्द को मित्रता गहिरो हुँदै गयो। त्यस समयमा अंकिताको प्रेमीको मृत्यु भयो। यो दुर्घटना पछि अंकिता पूरै वि छि प्त भएकी थिइन् । तर उनी यो कुरा मिलिन्दलाई बताउन सकिनन् । एक दिन अंकिताले मिलिन्दलाई सम्पूर्ण सत्य बताउने साहस गरीन्।
अंकिता मिलिन्दलाई भन्छिन् कि उनी आफ्नो प्रेमीलाई बिर्सन असमर्थ छिन्। यसको कारण, उनी आफ्नो स म्ब न्ध मा अगाडि बढ्न सक्षम छैनन्। मिलिन्दले जवाफमा भनेका थिए कि ुजब म तिमीसंग प्रेममा परें, सबै थोक तिमीलाई भयो। यहाँ सम्म कि त्यो भाग बाट जसमा तपाइँ तपाइँको अघिल्लो जीवन को बोझ बोक्दै हुनुहुन्छ। तेसैले नडराउनुहोस्, हामी दुबै मिलेर सामना गर्नेछौं।
मिलिन्द र अंकिताले जुलाई २०१८ मा स्पेनमा विवाह गरेका थिए। जब उनीहरु दुबैको बिहे भयो, अंकिता २६ बर्षकी थिइन् र मिल्मान्ड ५२ बर्षका थिए। त्यहाँ दुबै को उमेर मा २ थभबचक बर्ष को फरक छ, तैपनि दुबै एक सही तरीका मा आफ्नो विवाह ह्यान्डल गर्दै छन्। दुबै फिटनेस सनकी छन् र प्राय आफ्नो व्यायाम भिडियो साझा गर्नुहोस्।
Prevऋणमा डुबेर चिन्तित हुँदै आएका विक दम्पत्तिले छातीमा छोरी चेपेर…
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र १५ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
हात्तिवनमा नयाँ योजना बनेको थाहा पाएपछि ओली हतारिदै यस्तो प्रस्ताव लिएर देउवा फकाउन बुढानिलकण्ठ पुगे
अमेरिकाको न्युयोर्क र न्यु जर्सीमा बाढी, आपतकालीनको घोषणा, ९ जनाको मृत्यु
अब दुखी गरीब टुहुरा अशक्तले सित्तैमा खाना खान पाउने छैनन किनकी सरकारले सेवा गर्ने हातलाई कारवाही गरेको छ भन्दै गर्जिए यि युवा (हेर्नुहोस भिडियो)